Olee otú iji tọghata AVI ka WMV Easily na ngwa ngwa (Windows 8 gụnyere)
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata AVI ka WMV Easily na ngwa ngwa (Windows 10 gụnyere)
Gịnị ka ị pụrụ ime ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ AVI videos na PC gị na na ị ga-amasị tọghata ha nke kacha ndakọrịta na Windows dabeere omume ma ọ bụ software? Ọ bụ ihe kasị mma n'ihi na ị na tọghata ha ka WMV faịlụ Ọkpụkpọ, nke a na natively akwado site na Windows arụ ọrụ usoro. Ị ga-ahụ a zuru ezu nkuzi na otú iji tọghata gị AVI faịlụ na WMV faịlụ Ọkpụkpọ nnọọ ole na ole clicks ikike karịrị ebe a.
Part 1: Best AVI ka WMV Video Ntụgharị
Part 2: Free AVI ka WMV Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online AVI ka WMV Ntụgharị
Nkebi nke 4: Extended Knowlege maka AVI na WMV
Part 1: Best AVI ka WMV Video Ntụgharị maka Windows / Mac (Windows 10 gụnyere)
Ezigbo playback na Windows Media Player.
Akwụsịrịrị ndakọrịta edezi na ihe ọ bụla Windows dabeere software.
Nkwado ogbe akakabarede na lossless mma.
Tọghata ndị ọzọ na-ewu ewu video formats dị ka MP4, FLV, MOV na wdg
Olee otú iji tọghata otu AVI ka WMV
Download na wụnye ikpe mbipute jidesie gị PC. Mgbe ahụ, mmadụ abụọ-pịa ya ẹkedori video Ntụgharị. Nke a video Ntụgharị enye àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa akakabarede ọsọ na na a sara mbara format nkwado, ị pụrụ ọbụna tọghata faịlụ ndị ọzọ formats na ị chọrọ.
1. Tinye AVI faịlụ na na Ntụgharị
Pịa na Add Files bọtịnụ na bulite AVI videos ị na-amasị iji tọghata na Ntụgharị. Ị nwere ike n'ezie mbubata ọtụtụ AVI faịlụ n'otu oge n'ihi na ọ na kwadebere maka ogbe nhazi. Nke ahụ ga-azọpụta gị oge maka ihe ọzọ na gị ka-do ndepụta.
2. Nhọrọ faịlụ edezi
Na mgbakwunye na ogbe nhazi na lossless àgwà akakabarede, ị dị nnọọ mkpa pịa Dezie hazie gị videos Otú ọ dị na ị chọrọ. Mgbanwe pụrụ ịbụ preview ezigbo oge na ọ bụ omume iji tọgharịa na-arụ ọrụ ya nile ọzọ.
3. Format Ntọala
Gaba họrọ WMV dị ka gị mmepụta format ma ọ bụ họrọ ndị mmepụta Format dabeere na gị playback mmasị (iebased on oke nke obere ngwaọrụ). Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịhazie format ntọala, pịa Ntọala nke ahụ bụ nnọọ nri n'elu tọghata bọtịnụ.
Video Tutorial: Olee otú Jiri AVI ka WMV Video Ntụgharị maka Windows
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free AVI ka WMV Ntụgharị
Ndị ọzọ karịa eke, customizing na-ere ọkụ na gị onwe gị DVD, ị nwere ike mfe dezie ma tọghata gị video faịlụ na free video Ntụgharị. Ọ dịkwa ike ibudata videos si online gụgharia saịtị.
Pro: efu = Ọ dịghị ihe = Free!
1. Naanị atọghata ka ejikarị faịlụ formats.
2. Na-enweghị àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa akakabarede ọsọ.
3. Ọ dịghị metadata nlaghachie maka video faịlụ.
Nkebi nke 4: Na ihe ọmụma n'ihi na AVI na WMV Format
AVI bụ a multimedia akpa na e dere ma ọdịyo na video data. Ọ na-ekwe synchronous audio-na-video playback. AVI faịlụ akwado multiple gụgharia ọdịyo na video WMV bụ nwa afọ faịlụ Ọkpụkpọ introducted site Microsoft. Ọ na-ndammana akwado ma mee dakọtara na niile nke Windows-operating ma ọ bụ dabeere na usoro, usoro ihe omume na software.
Ihe ọmụma zuru ezu na WMV faịlụ Ọkpụkpọ